सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, पूरा पढेर ॐ लेखि सेयर गरौं ! – live 60media
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, पूरा पढेर ॐ लेखि सेयर गरौं !
दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं !!! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ।
परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलिङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिंगलाई पुजा गर्छन् ।
जस्तोः प्रकाश स्तम्भ/लिंग, अग्नी स्तम्भ/लिंग, उर्जा स्तम्भ/लिंग आदि । ब्रह्माण्डमा दुई चीज छन् उर्जा र पदार्थ । हाम्रो शरीर पदार्थबाट निर्मित हुन्छ भने आत्मा उर्जा हो ।यसै प्रकारले शिव पदार्थ र शक्ति उर्जाको प्रतीक बनेर शिवलिंगका रुपमा चिनिन्छ
← पेटको बोसो घटाउन अपनाउनुस् यी ९ घरेलु विधि
यी हुन दूधमा बेसार हालेर पिउँदा शरीरलाई हुने फाइदा →